Shina · Janoary, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Shina · Janoary, 2011
Tantara mikasika ny Shina tamin'ny Janoary, 2011
Sina: Lehilahy iray voasambotra fa nitoraka bilaogy momba ny fitokonan'ny mpamily fiarakaretsaka
GV Mpisolovava 15 Janoary 2011
Voalazan'ny NDdaily fa lehilahy iray fantatra amin'ny anarana hoe Atoa. Zhou no voasambotra noho izy nitoraka bilaogy kiritika mikasika ny fitokonan'ireo mpamily fiara karetsaka tao an-tanànan'i Xianning tao amin'ny faritanin'i Hubei tamin'ny 19 Desambra 2010 fa voampanga ho “nikarakara famoriam-bahoaka hanelingelenana ny filaminana ara-tsosialy”. Mbola voatàna any amin'ny polisy foana...
Sina: Io àry! 77 yuan isam-bolana ny hofan-trano
Fahalalahàna miteny 11 Janoary 2011
Mba hanehoana ny fijeren'ny CCP (Antoko Kaominista Sinoa) ny fiainan'ny olon-tsotra, dia nandefa ny fitsidihin'ny Filoha Hu Jintao ny fianakaviana kely fidiram-bola tao Beijing tamin'ny 30 Desambra taona 2010 ny fandaharan'ny tambajotram-baovao CCTV. Na izany aza, ny fifampiresahan'ny Filoha Hu sy i Guo Chunping, nambara fa solotenan'ireo mponina kely fidiram-bola, eo amin'ny toerana ahitàna trano azo ipetrahana, dia niteraka firehetana vaovaon'ny hatezeran'ireo mponin'ny aterineto izany
Ireo lahatsoratra be mpamaky indrindra tamin'ny taona 2010
06 Janoary 2011
Ao amin'ny Global Voices izahay dia miara-miasa amin'ny fikambanan'ireo mpirotsaka an-tsitrapo mba hamoahana tantara mikasika ny zava-mitranga ao anatin'ny bilaogy sy ny mediam-bahoaka eran-tany. Eto ambany, ny sasantsasany amin'ireo tantara izay nahasarika ny sain'ny olona be indrindra tamin'ny taona 2010 avy amin'ireo mpamaky amin'ny teny Anglisy.
Sina: Lisitr'izay heverina ho fiteny voasivana anaty SMS
GV Mpisolovava 05 Janoary 2011
Elaine Chow avy amin'ny Shanghaiist dia mitatitra mikasika izay lazaina ho lisitry ny SMS tondroina ho bahànan'ireo orinasa mpisahana ny fifandraisana amin'ny finday ao Sina tamin'ny 2010. Ny antontan-kevitra, naparitak'i @zuola tamin'ny alalan'ny Twitter, dia nambara fa nataon'ilay orinasa manome tolotra SMS, Boer, izay niezaka nampandre ny mpanjifan-dry zareo ny...